Indlela yokwenza iHeidi Braids - Isinyathelo 1 se-9
ZoBugcisa Umdlalo weMdaniso
Indlela yokwenza iHeidi Braids
Icandelo leenwele phakathi
Abanye abantu bayazi ukuba njenge-milkmaid braids. Abanye babhekisela kubo njengezandi zithsaba. I-Heidi braids ilula ukwenza kwaye yenza umsebenzi omkhulu wokugcina iinwele zakho ebusweni bakho. Abanye abadansi be- ballet banandipha ukubukeka okulula kunye nokukwazi ukugcina le style. Abanye abaqeqeshi bemidaniso bakhetha abadansi babo ukuba banxibe i-Heidi bors instead of buns for recitals and performances .
Ukuze wenze u-Heidi ubukhali, qalisa ngokuthatha inqabile yokuzinyo kunye nokuhlula iinwele zakho phantsi phakathi ukusuka phambili ukuya ngasemva. Zama ufumane inani elifanayo leenwele kwicala ngalinye ukwenzela ukuba iibhokhwe zakho ziya kuba.
Ukwahlula iinwele zakho zibe ngamacandelo amabini, usebenzisa inxalenye yeziko njengesikhokelo sakho. Zama ukwenza icandelo ngalinye malunga nobukhulu obufanayo. Ukuba ufuna, khusela icandelo elinye ngenqwelwe yeenwele okanye u-elastic rubber ukuyikhupha ngaphandle kwindlela usebenza ngayo.
Izinwele zihlala zilula ukusebenza kunye nokuba zimanzi. Amanzi amancinci okanye i-gel ye-spray iya kubamba izinwele ezihambayo kunye nokunceda ukudala i-braids. Ngebhotile yeprayiti yamanzi, nciphisa kancane zombini iinwele zeenwele.
Thatha iqela lokuqala leenwele uze ulethe konke emva kwendlebe yakho, usebenzisa ibrashi xa kuyimfuneko. Ngokukhawuleza ukhalibise izinwele yonke indlela ukuya ekupheleni. Qinisekisa ukuba u-braid ukuya kude kunokwenzeka ukuba ugweme naziphi na iinwele ezithatha emva koko.
Ubungqina obukhuselekileyo kunye ne-Elastic
Khusela iinwele eziboyiweyo ngebhodi ye-rubber okanye e-elastic ekupheleni. Zama ukufumana i-elastics encinci njengeziphelo aziyi kuba nzima.
Icandelo lesibini leBraid
Ngokukhawuleza ukhaliphe inxalenye yentloko yeenwele, ufumane esinye isisombululo. Kufuneka ufumane amabhondi amabini amnandi, elinye icala ngalinye. Ukuba unayo i-bangs, shiya yedwa ngoku. Emva kokuba ama-Heidi braids azalisekile unokwazi ukuchukumisa i-bangs yakho emva okanye ukukhuselekile ngeemboniselo okanye i-barrettes.
Ubungqina obukhuselekileyo kwiNqwelana
Thatha ibhondi yokuqala uze uyibeke ngaphaya kwentloko yakho, uyibuyisele ngokungqongqo entloko yakho ngokunokwenzeka. Ukusebenzisa izikhonkwane ezimbalwa ze-bobby, khusela lonke ubhokhwe entloko yakho. Qala ukupakisha kwiphepha ngalinye uze udibanise ezimbalwa phakathi. Zama ukulufaka phantsi phantsi kwesibhakabhaka ukwenzela ukuba zingabonakali. Sebenzisa izikhonkwane ezincinci ukuba unako, kodwa ukuba unamawele anqabileyo okanye angaqhelekanga, izikhonkwane ezinkulu ziza kusebenza kangcono kwaye zibeke kwindawo ede.
Ukhuseleko lwesiBini olukhuselekile kwiNqwelana
Thatha intsimbi yesibini uze uyifake ngaphantsi kwebhodi yokuqala, uphinde uphonce njengoko uhamba. (Abanye abantu bakhetha ukubeka isibini sesibini phambi kweyokuqala.) Gquba ukuphela kwesibhakabhaka malunga neyokuqala kweyokuqala kunye neenwele ezingaphezulu. Qinisekisa ukuba isiphelo sesibhobho sokuqala asixhasi ngokukhangela phantsi kweyesibini ukuze zonke iziphelo ezivulekileyo zifihliwe. Fakela phantsi nayiphi na inwele engaphezulu okanye iindawo eziziva zikhululekile.
I-Heidi Braids epheleleyo
Ukuqinisekisa ubambelele kakuhle, welula i-hairnet ecaleni kwelinye icala le-Heidi ubhokhwe kwenye. Gweba i-hairnet phantsi uze uqhubeke ugoqa kuze kube nzima. Ukugqiba i-hairstyle yonke ngokuphalaza ngobubele ngeenwele.
Apho unayo ... u-Heidi ulungelelanise embalwa imizuzu. Ngokuqinisekileyo, ukubethelela i-braids yakho ngeentyatyambo okanye i-ribbon (kufana nokufakela ibhanti ye-ballet) ihlala ikhethwa. Yonwaba!
Iibhendi zeDattible zeDrive zivumela ukufikelela ngokukhawuleza kwienyawo
Isitayela, i-Fit, kunye nesandi: Ukuthenga iinqwelo ze-Tap
Izikhwama zeMdaniso kunye nokokuPakisha
Izipho ezigqibeleleyo zabaTitshala beMdaniso
Ballet A badala
Izixhobo Ezinkulu Zokuqala AbaFrentshi AbaFrentshi
Iingcamango zesiTerbia zesiTyhu: I-Ricordare
Uhambo oluhamba ngeNkqubo yeSolar: IPetet Mars
10 Iinkcukacha Ngee-Orangutans
I-SAT izikolo zokufakwa kwiiKholeji eziphezulu zase-Ohio
I-Ahmose Tempest Stele - I-Weather Report evela kwiYiputa yaseYiputa
Iinqonga ezi-5 eziphambili zeSfref eFlorida
Usesho lweSuku lweVeteran Word, Crossword Puzzle, kunye nokuNinzi
I-Boise State University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iimpazamo zegrama ze-Grammatic You Can Avoid
Ukuguqula Amanqaku kwiNombolo kunye neCandelo leVersa
Top Howard Jones Iingoma zee-80s
Indlela yokuchonga uMthi woMnyama oMnyama
LweMithi yeKhempi Inkcazo